I-opera kubomi bukaSteve Jobs ivulwa ngalo Mgqibelo | IPhone iindaba
I-opera kubomi bukaSteve Jobs ivulwa ngalo Mgqibelo
I-opera esekwe kubomi be-CEO ye-Apple kunye nomsunguli wenkampani uSteve Jobs sele eza kukhululwa eSanta Fe (eNew Mexico) ngalo Mgqibelo. Umsebenzi ubizwa Indalo (R) yokuvela kukaSteve Jobs kwaye inkulumbuso yayo iya kuba nge-22 kaJulayi nge-20: 30 ngokuhlwa, kwinqanaba lasehlotyeni leSanta Fe Opera, ke ngoko, umdlalo uza kudlalwa ngaphandle.
I-opera yayiye kuphuhliso ukusukela ngo-2015 Yenziwe ngumculo we-elektroniki u-DJ Mason Bates kunye no-librettist u-Mark Campbell. Umdlalo ubalisa ibali likaSteve Jobs kunye nomzabalazo wakhe wokulinganisa ubomi, usapho kunye nomsebenzi. Ukongeza, intsebenzo ihamba kunye neokhestra, isiginci kunye nezandi zendalo, ezihambelana nomculo we-elektroniki kunye nezixhobo zesandi sika-Apple.
UBates uchaze esinye seziganeko zeendaba zeABC kwi udliwanondlebe kwiveki ephelileyo, Ukuqaqambisa umzuzu apho uSteve Jobs wazisa i-iPhone yokuqala ngaphambi kokuba oyiswe sesi sifo. Okwangoku kwimason opera kaMason Bates, 'The (R) Evolution kaSteve Jobs', kuvakala isandi esibuhlungu esiphuma emngxunyeni weokhestra, ukuhla kokuhla kokuchithwa okuchazwe kumanqaku njenge 'cutoff elektroniki.'
«Yindibaniselwano ye-synthesizer emi yodwa kunye Isandi sokwenyani kwi-Mac endala kwiidrive ezinzima xa zivaliwe enye ibhekise umva kwicala lokuqala, ”ucacise watsho uBates kudliwanondlebe kwiveki ephelileyo ePalacio de la Ópera eSanta Fe, apho umsebenzi wakhe uza kukubona ukukhanya kwaye uya kukhutshelwa uluntu ngoMgqibelo olandelayo.
"Lo mzuzu kulapho aqonda khona ukusweleka kwakhe, ke ngoko wayefuna ukuba neso sandi simkhaphayo, ngathi ucimile," utshilo uBates. Nokuba ayinakho ukuqonda isandi, oku yongeza ubunyani ukusukela umntu, ongumbhali wale opera, ngumdali wezinye izixhobo esizimameleyo ngalo mzuzu ”.
I-opera, ehlala malunga neyure enesiqingatha, iqala ngesandulela kwigaraji yosapho lakwaSteve Jobs eLos Altos, eCalifornia, notata ophambili, uPaul Jobs, ukunika umntwana wakho ibhentshi lomsebenzi. Ukusuka apho, itsiba iye ku-2007, apho imisebenzi yazisa nge-iPhone yokuqala, kwaye ibuye ibuye ngexesha kwaye ibuye ibuye kwakhona phakathi kuka-2007 kunye neminyaka yokuqala yemisebenzi ekukhuleni ngokupheleleyo e-Apple. UCampbell noBates, abathi i-opera ayizimiselanga kunyelisa okanye ukuzukisa umzobo kaSteve Jobs, bawukhokele umsebenzi ngokwamaxesha afihliweyo kulandelelwano olubekwe yimvakalelo kunye nenkumbulo kumfanekiso wobukrelekrele obenzileyo Apile. Amanqaku ebali, ukongeza kumfanekiso obalulekileyo kaSteve Jobs, kunye nabalinganiswa abaxhasayo abanjengo-Apple co-founder uSteve Wozniak, uLaurene Powell Jobs, kunye noChrisann Brennan, umlinganiswa ngamnye eqaqanjiswe ngothotho olwahlukileyo lwezandi.
Indalo (R) yokuvela kukaSteve Jobs Ixhaswe ngemali ziinkampani ze-opera eSan Francisco naseSeattle, iqinisekisa ukubuyisa ukumelwa kwikamva le opera ye-avant-garde eCarlifonia nase Washington. Ukusukela ukusweleka kwakhe ngo-2011, ubomi bukaSteve Jobs bebukhona umxholo weencwadi ezininzi, iifilimu kunye namaxwebhu, kubandakanya enye eyalelwe nguDanny Boyle, ebhalwe nguAaron Sorkin. Lo mboniso bhanya-bhanya, owakhutshwa ngo-2015, waba yimpumelelo enkulu kwi-ofisi yebhokisi yesinema. Ukusukela ukusweleka kwakhe, inani lomseki wenkampani ebaluleke kakhulu kwezobugcisa kwimbali, kunye neMicrosoft, yayijolise kwiindlela ezininzi zokuxhaphaza ezoqoqosho. Ixesha elizayo liza kuxela isiphumo sale opera intsha, kodwa into eqinisekileyo kukuba ayizukuba ngumsebenzi wokugqibela osekwe kubomi beMisebenzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-opera kubomi bukaSteve Jobs ivulwa ngalo Mgqibelo
Ikhibhodi ye-Swiftkey ihlaziywa ngophuculo kwi-3D Touch kwaye yongeza imixholo emitsha yasimahla
UGoogle uhlaziya iapps yakhe yokukhangela, ayenze ibe yeyakho ngakumbi kumsebenzisi ngamnye